Arahabao i Bassel fa tsingerintaona nahaterahany ny 22 Mey · Global Voices teny Malagasy
Arahabao i Bassel fa tsingerintaona nahaterahany ny 22 Mey
Voadika ny 09 Avrily 2019 3:51 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana May 2014 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nankalaza ny faha-33 taonany – ny fahatelo tao an-tranomaizina tany Damaskosy ny Alakamisy 22 May 2014 i Bassel Khartabil, fantatra amin'ny anarana hoe Safadi .
Nosamborina tany Damaskosy tamin'ny 15 Martsa 2012 i Bassel, tamin'ny tsingerintaona voalohany nisian'ny fitroarana Syriana.
Vao saika hanambady an'i Noura, ilay mpisolovavany sy ho lasa vadiny, izay novadiany ara-dalàna tany am-ponja taty aoriana i Bassel .
Injenieran'ny solosaina Syriana-Palestiniana i Bassel ary mino tanteraka ny fahefana eo amin'ny tambajotra misokatra sy ny fiaraha-miasa. Mpikambana malaza tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny aterineto misokatra ao Syria izy talohan'ny nisamborana azy, vondrom-piarahamonina manandratra ny fampiroboroboana ny rindrambaiko tovozina malalaka, ny kolontsaina misokatra ary manohana ny famoronana ny sehatra fiaraha-miasa ao Damaskosy.
Mbola mpitarika manana ny lanjany izay nanentana sy nanamora ny asan'ireo olon-kafa maro izy, tsy tany Syria ihany fa manerana ny faritra ihany koa. Tsy nahazaka izany ny fitondrana Syriana. Raha fintinina, mbola tany am-ponja i Bassel tamin'ny fotoana nivoahan'ny lahatsoratra satria iray amin'ireo manan-tsaina mamirapiratra indrindra sy mampanentana fanahy indrindra izy tamin'ny taranany.
Tamin'ny taona 2012, namoaka ny laharan‘i Bassel ho faha-19 tamin'ny lisitra ahitana ireo mpandinika miisa 100 manerantany nahasarika olona indrindra tamin'ny “fanamafisana, amin'ny tsy nampoizina, ny revolisiona Syriana am-pilaminana” ny gazetiboky Foreign Policy.
Tamin'ny volana Martsa 2013, nomena ny Lokan'ny Fahalalahana Nomerika ao amin'ny Tondro momba ny Sivana izy noho “noho ny fanoloran-tenany mavitrika amin'ny aterineto misokatra, amin'ny alàlan'ny fampianarana ny hafa momba ny teknolojia, ary ny traikefany maimaim-poana hanampiana an'izao tontolo izao.”
Namana akaikin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices i Bassel izay nanatrika ny vovonan'ny Bilaogera Arabo faharoa tany Beirota tamin'ny taona 2009. Mbola mahatsiaro azy ny namany amin'ny halemem-panahiny sy izy tena malala-tanana ary namana tsara hananana sy mahafinaritra amin'ny fitarihana.
Tsy tianay i Bassel hankalaza ny tsingerintaona nahaterahany, irery any am-pigadrana. Tianay izy handre ny feonay miteny mafy sy mazava ary mahafantatra fa mbola manohana azy izahay amin'ny raharahany.
Niantso ny rehetra izahay noho izany handray anjara tamin'ny hetsika Alakamisy 22 Mey izay nokarakarain'ny Global Voices Advocacy, niaraka tamin'ny fiaraha-mientan'ny mpiara-miombon'antoka, hanohana ny fahafahan'i Bassel. Hoy ny antsoantsonay nandritra ny hetsika hoe: “Mahatafiditra antsika rehetra izany: ny 22 Mey, lazao hoe afaho i Bassel.”
Ireo fomba telo nafahana nandray anjara:
1- Mandray anjara amin'ny marathon tao amin'ny Twitter (Tweetathon) ny 22 Mey. Nampiasa ny tenirohy nandritra ny andro araka izay azo atao: #AfahoBassel sy #MikasikaAntsikaRehetraIzany.
2- Mandefa sary ao amin'ny AfahoBassel ao amin'ny Tumblr miaraka amin'ny hafatra fanohanana iray na roa amin'ireto tenirohy ireto: #AfahoBassel, #MikasikaAntsikaRehetraIzany..
3- Manonta pirinty ny iray amin'ireto afisy ôrizinaly nataon'ny mpanakanto Kalie Taylor ireto – mitahiry izany ao amin'ny sarinao na mandefa izany any amin'ny toerana ho an'ny daholobe ao an-tanànanao na ny tanàndehibe misy anao.